राष्ट्रसङ्घ : दिर्घरोगको उपचारमा चाहेजति प्रगति भएन
असोज ७, २०७५ आइतवार १६:०७:३२
पेरिस - विश्वका आधाभन्दा बढी मुलुकले सन् २०३० सम्ममा दिर्घरोगबाट हुने मृत्युलाई एक तिहाइले कमी ल्याउने राष्ट्रसङ्घीय लक्ष्य पूरा गर्ने सम्भावना नदेखिएको अनुसन्धाताहरुले बताएका छन् । क्यान्सर रोग, मुटुरोग, मधुमेह र जटिल किसिमका श्वासप्रश्वास रोगहरुबाट सन् २०१६ मा ...
अर्जेन्टिनाको सिनेटले पारित गरेन गर्भपतन कानुन
साउन २४, २०७५ बिहिवार १७:३६:०८
ब्युनस आयर्स – अर्जेन्टिनाको सिनेट (संसदको माथिल्लो सदन) ले गर्भपतनसम्बन्धी विधेयकको विपक्षमा मतदान गरेको छ । यो मतदानसँगै उक्त विधेयक सिनेटबाट ‘अस्वीकृत’ भएको छ । यो असफलतासँगै अर्जेन्टिनाका महिला अधिकारवादीहरु निराश भएको बताइएको छ ...
फिलिपिन्समा सयौं आमाले गराए एकसाथ स्तनपान
साउन २१, २०७५ सोमवार १०:०४:३२
एजेन्सी– फिलिपिन्सका सयौं आमाहरुले एकसाथ आफ्ना सन्तानहरुलाई स्तनपान गराएका छन् । आइतबार स्तनपान सप्ताहका सन्दर्भमा सरकारले गरेको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दै उनीहरुले सामूहिक स्तनपान गराएका हुन्। झन्डै १५ सय महिलाहरुले फिलिपिन्सको राजधानी मनिलास्थित मनिला स्टेडियममा...
एमबाप्पेले विश्वकपको सबै कमाइ उपचाररत र अपांगता भएका बालबालिकालाई सहयोग गर्ने
साउन १, २०७५ मगलवार १८:०२:५४
काठमाडौं– फ्रान्सलाई रसियामा सम्पन्न विश्वकप २०१८ को उपाधि जिताउन युवा फरवार्ड केलियन एमबाप्पेको भूमिका उत्कृष्ट रह्यो। १९ वर्षीय स्टार एमबाप्पेले ७ खेलमा ४ गोल गर्दै फ्रान्सलाई विश्वविजेता बन्न मात्र सघाएनन्, व्यक्तिगत रुपमा उनी फुटबलका महान् खेलाडी पेलेपछि विश्वकपमा ग...
असार १८, २०७५ सोमवार १२:४५:२४
रुसमा जारी विश्वकप फुटबलमा एक जना प्रशिक्षक लट्ठीको सहारामा यताउति गरिरहेको देखिन्छन् । उनी क्रिस्टियानो रोनाल्डो जस्ता स्टार खेलाडी रहेको पोर्चुगललाई पाखा लगाएर क्वार्टरफाइनल पुगेको उरुग्वेका प्रशिक्षक ओस्कार तबरेज हुन् । लट्ठीको सहारामा यताउति गरेपनि उनीसँग आफ्नो टिम र फ...
असार १२, २०७५ मगलवार ०६:००:००
श्वासप्रश्वास एउटा अनियन्त्रित प्रक्रिया हो । श्वास फेर्न हामीलाई कुनै थप उर्जा खर्च गर्नुपर्दैन । तर, राम्रोसँग श्वासप्रश्वास लिएमा यसले स्वास्थ मात्र बनाउँदैन मानिसलाई दीर्घजीवि पनि बनाउँछ । बिहान ५ मिनेट जति लामो श्वास लिने छाड्ने गर्नुपर्छ । यसरी गरिने श्वासप्रश्वास व्यायायमका...
असार ६, २०७५ बुधवार ०६:००:००
केही महिनाअघि मलाई थाहा भयो, मलाई न्युुरोइन्डोक्राइन क्यान्सर भएको रहेछ। मैले पहिलोपटक यो शब्द सुनेको थिएँ। सोधखोजपछि थाहा भयो, यो रोगका बारेमा त्यतिधेरै अनुुसन्धान भएको रहेनछ। यो एक अचम्म खालको शारीरिक अवस्था हो र यसको उपचारको अनिश्चितता बढी छ। अहिले...
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले स्वीकारे कोहलीको फिटनेश च्यालेन्ज, फिट हुन के गर्छन्?(भिडियो)
असार ४, २०७५ सोमवार १५:१७:५७
६७ वर्षीय भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी आफ्नो स्वास्थ्यप्रति निकै सजग छन्। उनी आफूलाई फिट राख्न योग गर्ने गर्छन्। उनले हालै आफूले व्यायाम गरिरहेको भिडियो समाजिक सञ्जाल मार्फत सेयर गरेका छन्। १.४८ मिनेटको भिडियोमा गार्डेनमा खाली खुट्टै विहानीपख व्यायाम गरेको देख्न सकिन्छ। ...
किन गर्दैनन् नेताहरू एम्सका डाक्टरप्रति विश्वास ?
असार ३, २०७५ आइतवार ११:५८:२६
नयाँदिल्ली– प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीदेखि भारतका अधिकांश मन्त्रीले आफ्नो उपचारका लागि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) रोज्छन् । तर अनौठो के छ भने उनीहरुको रोजाईमा एम्सका सर्जन भने पर्दैनन्। राजनीतिज्ञहरु एम्समा भर्ना भएपनि उपचार गर्न भने बाहिरबाट निज...
जेठ ३१, २०७५ बिहिवार १८:०४:२१
१. विश्वभर बर्सेनि करिब १ अर्ब १२ करोड युनिट रगत रक्तदानमार्फत् संकलन हुन्छ। २. अमेरिकामा बर्सेनि १ करोड ३६लाख युनिट होल ब्लड र रेड ब्लड सेल संकलन हुन्छन् । ३. विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार भारतमा प्रत्येक वर्ष २० लाख युनिट रगत अभाव हुन्छ र भारतमा कुल जनसंख्...
जेठ २९, २०७५ मगलवार ०८:१९:२७
स्वास्थ्य कस्तो छ भन्नेबारे हाम्रो शरीरका विभिन्न अंगले अनेक किसिमका संकेत दिइरहेका हुन्छन् । हातले पनि हृदयाघात, पोषक तत्वको कमी, ‘थाइराइड फङ्सन’ जस्ता कुराको संकेत गर्ने गर्छन् । हत्केला, छालाको बनावट, नङ, पसिनाका ग्रन्थी र रङले शरीरमा विभिन्न तत्वको अभावको ...
जेठ २८, २०७५ सोमवार १६:३३:५१
पटना - मदिरा प्रतिबन्ध लगाएको बिहारले खैनी तथा सूर्तीमा समेत प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। बिहार राज्यको स्वास्थ्य विभागले यो विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ। मुख क्यान्सरको प्रमुख कारणका रुपमा खैनी तथा सूर्ती रहेको भन्दै राज्य सरकारले यसको प्रतिबन्धको क...
जेठ २५, २०७५ शुक्रवार ०७:००:००
प्रोटिन मानिसको स्वास्थ्यका लागि महत्वपूर्ण तत्व हो। यसले शरीरको कोशिका निर्माण र मर्मतमा ठूलो भूमिका निर्वाह गर्छ। यो हरेक उमेरका मानिसलाई आवश्यक हुन्छ। गर्भावस्थामा प्रोटिन बढी आवश्यक हुन्छ। शिशुको निर्माण प्रक्रियामा पनि यसको अहम् भूमिका हुन्छ। मानिसको पूरै जीवनमा प्रोटिन ...
जेठ २४, २०७५ बिहिवार १३:१४:४६
तोरीको तेल खासगरी भारत, रोम र ग्रिसमा हजारौं वर्षदेखि लोकप्रिय रहँदै आएको छ । सबैभन्दा पहिले यो ३ हजार बीसीमा भारतमा खेति गरिएको अनुमान गरिएको छ । दार्शनिक हिप्पोक्रेटसले तोरीका दानालाई केही निश्चित खालका औषधि बनाउन प्रयोग गर्थे । रोमनहरुले यसलाई रक्सी बनाउन प्रयो...
प्रदूषणले फोक्सो र मुटुमा कसरी असर गर्छ ?
जेठ २२, २०७५ मगलवार १४:२५:४०
सामान्यतः प्रदूषणका कारण श्वासप्रश्वासको समस्या निम्तने ठानिन्छ । तर फोक्सो, मुटु, मिर्गौला र मानसिक स्वास्थ्यमा पनि प्रदूषणले असर पार्छ । त्यसमध्येमा पनि सबैभन्दा बढी असर फोक्सोमै पर्छ । हामीले श्वास फेर्दा हावामा भएको हानिकारक तत्व फोक्सोसम्म पुग्छ र त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउ...
जेठ २२, २०७५ मगलवार १३:३१:०९
गर्मी महिनामा सर्पदंशका घटना निकै बढ्छन्। खासगरी नेपालको तराईं भेगमा सर्पदंशका घटना बढी हुन्छन्। अमेरिकामा हरेक वर्ष ८ हजार मानिसहरु सर्पले टोकेर अस्पताल पुग्छन्। तीमध्ये ५ जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अधिकांश अवस्थामा सर्पदंश खतरनाक हुन्छन्। सर्पले टोकेको स्थानमा ...
जेठ २१, २०७५ सोमवार १२:०९:४९
डिमेन्सियाका बिरामीहरुको संख्या विश्वभर दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ। यो बिर्सने रोगको हालसम्म उपचार त छैन। तर पछिल्ला अनुसन्धानहरुले यो रोग लाग्ने सम्भावना कम गराउन सकिने देखाएका छन्। ‘यो नै अन्तिम होइन, विगत ५ वर्षमा हामीले डिमेन्सियाको सम्भावित खतरा पहिचान गर्ने...
जेठ २०, २०७५ आइतवार १२:०७:१३
धूूमपानले मुटुलाई कति क्षति गर्छ भन्नेबारेमा चेतना जगाउन विश्व स्वास्थ्य संगठनले हालै जानकारीमुलक भिडियो सार्वजनिक गरेको छ। धूमपानले मुटुमा पार्ने असर र धूमपान छाड्न प्रोत्साहित गर्ने उद्देश्यले ३० सेकेण्ड लामो भिडियो सार्वजनिक गरिएको हो। भिडियोमा सुरुमा मुटु ...
५. उमेरअनुसार कति मासु खाने?